क्यान्डी नाश स्तर 136 धोखा दिन्छ र सल्लाह - क्यान्डी क्रश खेल - नि: शुल्क Lives सुझावहरू धोखा दिन्छ
तिमि यहाँ छौ: घर / वर्गीकृत / क्यान्डी नाश स्तर 136 धोखा दिन्छ र सल्लाह
अन्तिममा अद्यावधिक गरियो जुलाई 23, 2021 द्वारा Isobella फ्रान्क्स एक टिप्पणी छोड्नुहोस्
के तपाईलाई आफ्नो जीवन रंग कम भएको महसुस हुन्छ? आफ्नो जीवनमा रंग थप्न आवश्यक छ?? ठिक छ यदि तपाईंलाई त्यस्तो लाग्छ भने पहिलो स्थानमा तपाईंले सायद अझै क्यान्डी क्रस खेल्नुभएको छैन. यो रंगीन मिठाई को खेल हो. ती मध्ये केही धारीदार छन्, केहि बेरिएका छन् र केहि केवल साधारण मिठाईहरू छन्. तपाईंले नयाँ स्तर हासिल गर्न यी क्यान्डीहरूलाई कुचल्नु पर्छ. यो रोचक छैन?
यो खेल खेल्ने मानिसहरूलाई यो रोचक लाग्छ. तथापि, उनीहरूलाई के मन पर्दैन भन्ने तथ्य यो हो कि तिनीहरू निश्चित स्तरहरूमा फसेका छन्. तपाईं क्यान्डी क्रश स्तरमा आतंकित हुन बाध्य हुनुहुन्छ 136. कारण यो एक जटिल स्तर हो जसलाई उचित चाल चाहिन्छ. के हुन्छ यदि हामी तपाईंलाई यस स्तरमा मद्दत गर्न सक्छौं? के यसले तपाईलाई खुशी बनाउँछ? वास्तवमा भन्ने हो भने, मलाई थाहा छ यो हुनेछ, त्यसैले हामी यहाँ ल्याइरहेका छौं क्यान्डी नाश स्तर 136 धोखा दिन्छ र सल्लाह.
यसलाई एक जटिल स्तर मानिन्छ किनभने यसलाई केहि जटिलताहरू समाधान गर्न आवश्यक छ. यस्का साथसाथै, यस स्तरमा, तपाईंले र्‍याप गरिएको प्लस र्‍याप गरिएको क्यान्डी सङ्कलन गर्नुपर्छ. त्यस्तै, तपाईंले स्ट्रिप गरिएको क्यान्डी पनि सङ्कलन गर्नुपर्छ. यी दुईसँगै, तपाईले रङ बम लिनु पर्छ. पत्राचार रूपमा तपाईले कम से कम स्कोर गर्नु पर्छ 30,000 पोइन्ट र यो सबै मा गर्नु पर्छ 40 चाल. के यो गाह्रो काम होइन?? वास्तवमा होइन, यदि तपाईं हाम्रा सुझावहरू र युक्तिहरू पालना गर्नुहुन्छ भने तपाईं एक पटकमा यो स्तर खाली गर्न सक्षम हुनुहुनेछ.
अन्य स्तरहरू जस्तै यो स्तर खाली गर्न विशेष क्यान्डीहरू फार्म गर्नुहोस्.
कम से कम सम्भव चालहरुमा विशेष क्यान्डी बनाउन, तपाईंले चकलेट र meringues हटाउनु पर्छ. यसले तपाइँलाई सजिलैसँग बोर्ड खाली गर्न मद्दत गर्दछ.
बोर्डमा चाललाई कम बनाउने प्रयास गर्नुहोस् किनकि यसले चकलेट बेमा राख्न मद्दत गर्दछ. यसबाहेक, यसले तपाईंलाई विशेष कम्बोहरू बनाउन पनि मद्दत गर्नेछ जसले बदलामा थप क्यान्डीहरू ल्याउनेछ. त्यस्तै, you should focus on combining two wrapped candies because it is the hardest part of this level.
धारीदार क्यान्डीहरू नराख्नुहोस्. सट्टा, चकलेट खाली गर्न तिनीहरूलाई प्रयोग गर्नुहोस् अन्यथा यसले तपाईंलाई बोर्डमा स्वतन्त्र रूपमा सार्न दिँदैन.
विशेष मिठाईहरू चिन्तित छन्, सही बनाउनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्. तुलनात्मक रूपमा, यी विशेष क्यान्डीहरू एकअर्काको छेउमा बनाउन गाह्रो छ त्यसैले तिनीहरूलाई सँगै सार्नुहोस्. आदर्श रूपमा, यो स्तरको लागि महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले समय भन्दा पहिले आफ्नो चालहरू योजना बनाउनुहुन्छ.
रंगीन क्यान्डी अर्डरहरू भर्नको लागि तपाईंको विशेष क्यान्डीहरू प्रयोग गर्ने बारे सावधान रहनुहोस्. त्यसैले, कलर बमको सट्टा राम्रो विचार हुनेछ किनकि यसले क्यान्डीहरूबाट छुटकारा पाउन मद्दत गर्दछ. यसले तपाईंलाई बोर्डमा राम्रो चालहरू गर्न थप अवसरहरू सिर्जना गर्न मद्दत गर्नेछ
एक अन्तिम सुझाव खेल योजना हुनेछ. सबै चालहरू सहयोगी हुनुपर्छ. तपाइँको फोकस भनिएको चाल भित्र अन्तिम लक्ष्य प्राप्त गर्न मा रहनु पर्छ. आफ्नो स्कोरलाइन मा नजर राख्नुहोस्. यसले सधैं मद्दत गर्नेछ.